Alldocube အမှတ်တံဆိပ် M5X Pro 4G တက်ဘလက် ~ The ICT.com.mm Blog
Alldocube အမှတ်တံဆိပ် M5X Pro 4G တက်ဘလက်
အခုတစ်ခါမှာတော့ ငွေရောင်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး သုံးရတာ အင်မတန်အဆင်ပြေတဲ့ Alldocube အမှတ်တံဆိပ် M5X Pro 4G တက်ဘလက်လေးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်တွေ မြန်ဆန်သွက်လက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ကြီးမားလေးလံတဲ့ ဂိမ်းတွေလည်း ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ အဲဒါအပြင် HD ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ သီချင်းအပုဒ်ရေ သောင်းဂဏန်းနဲ့ချီပြီး ဆန့်ပါသေးတယ်။
ထပ်ထည့်ချင်သေးရင်လည်း TF နဲ့ ထပ်ထည့်လို့ရတဲ့အတွက် သိပ်ကိုဟန်ကျတဲ့ တက်ဘလက်‌လေးပါ။
10.1 လက်မမျက်နှာပြင်ဧရိယာမှာ resolution 2560 x 1600 ထွက်ရှိပါတယ်။ IPS display ဖြစ်တဲ့အတွက် အရောင်အရည်အသွေး တောက်ပစိုပြေပါတယ်။ ဘက်ထရီကတော့ 6,600 mAh ဖြစ်တဲ့အတွက် အကြာကြီး အသုံးခံပါတယ်။
ကင်မရာအနေနဲ့ကတော့ နောက်ကင်မရာကို 5000W megapixel auto focus HD ကင်မရာတပ်ဆင်ပေးထားပြီး ရှေ့ကင်မရာက 2000W megapixel ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိုဆက်ဆာက Deca-core (A72×2@2.6GHz，A53×4@2.0GHz，A53×4@1.6GHz) ဖြစ်ပြီး Memory (RAM): 4GB နဲ့ Storage (ROM): 128GB ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ဈေးနှုန်းက K253,000 ပဲရှိလို့ သုံးပျော်တဲ့ ‌ဈေးပါပဲ။ အာမခံ ၁ နှစ်ပေးထားပါတယ်။
ဝယ်မယ်ဆိုရင် အောက်က link ကို နှိပ်ပါခင်ဗျ။
Newer Dell အမှတ်တံဆိပ် i5 8th gens (Happy Hour 14-09-2020)
Older Honeywell Black CADVR-1004FD 1080P 1U ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယို Recorder
Tablet လား? Laptop လား? ဘယ်အရာ က သင့် အလုပ်အတွက် သင့်တော်မလဲ?
iPad Air , Samsung Galaxy Note 10.1 တို့လို Tablet တွေဟာ ဈေးသက်သာတဲ့ Laptop တွေရဲ့ ဈေးနဲ့ တန်းတူအနေအထားမှာရောင်းချနေကြပါတယ်။ ဈေးနှုန်း ...
Samsung က ဖုန်းဈေးကွက်မှာသာမက Tablet ဈေးကွက်မှာလည်း Apple ကိုအနိုင်ယူအုံးမည်
July လကနေ September လအတွင်းက ဖုန်း Company တွေရဲ့ ဖုန်းရောင်းချရမှုကိုတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Samsung ကသူ့ရဲ့ ထိပ်တန်းပြိုင်ဖက် Company...
ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်ပြီး ဂိမ်းတွေကိုကောင်းကောင်း Run နိုင်တဲ့ Tablet တစ်လုံးဆိုရင် လူတိုင်း၀ယ်ယူကြမှာပါ။ အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ကလည်း Graphic ကော...
IBEAL GSM SIM Tablet (8GB) new edition
GSM SIM card ကို ထည့်သွင်းဖုန်းပြောနိုင်ပြီး 2G internet ကိုပါအသုံးပြုနိုင်တယ်။ ရှေ့ နောက် dual camera ပါ၀င်ပြီး3megapixel ဖြင့်ရရှိန...
Acer Iconia Tab B1 – A71
Iconia Tab B1-A71က GSMစနစ်နဲ့ SMS, MMSစနစ်တွေကို သုံးစွဲနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ SIM အတွက် နေရာထည့်သွင်း တည်ဆောက်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။ အရွယ်အ...
Central Processing Unitက A10 ManyCore Cortex A8ကို အသုံးပြုထားပြီး အမြန်နှုန်းက 1.0 MHz ရှိမှာပါ။ Graphicအတွက် Mali 400 အသုံးပြုထားပါတယ...
Pros လဲလှယ် တပ်ဆင်နိုင်တဲ့ Battery ဒီဇိုင်းမျိုး ထုတ်လုပ်ထားလို့ Charging အတွက် အခက်အခဲရှိတဲ့ နေရာတွေကို သယ်သွားမယ်ဆိုရင် အသင့်တော်ဆုံ...
သယ်ယူရ လွယ်ကူအောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ PC အသေးစားဖြစ်တဲ့ ThinkPad Helixဟာ Screen Display အကျယ် ၁၁.၆ လက်မ ရှိမှာဖြစ်ပြီး Lenovoရဲ့ နောက်ဆုံးထု...
Dellဟာ သူတို့ရဲ့ Latitude 10 Tabletကို Security တိုးမြှင့်ဖို့အတွက် Smart Cardနဲ့ Fingerprint Readerကို ထည့်သွင်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ...
HYUNDAI Rock x800 Tablet
ပါးလွှာပြီး သယ်ဆောင်ရ လွယ်ကူတဲ့ Tabletလေး ဖြစ်ပါတယ်။ Wi-Fi အသုံးပြုရာမှာလည်း မြန်ဆန်ပြီး Bluetoothလည်း ပါ၀င်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မ...